Ngathi – Máy dán gỗ BSY, Dây chuyền bóc ván ép, Máy sấy ván ép, Máy ép nóng ván ép, Máy đánh dấu bản ghi, Máy cắt ván ép, Máy phết keo, Máy ép sơ bộ cho ván ép, Cưa cắt mép ván ép, Máy tiện bóc ván ép
4 icala uMcwangcisi
» Company Iinkcukacha » Ngathi » Ngathi
Yasekwa ngo-1956, i-Weihai Baishengyuan Industry Co., Ltd. (imizi-mveliso yoomatshini bokwenza amaplanga weihai) ikwisixeko esihle esiselunxwemeni iWeihai, eShandong, eTshayina. Luphando oluqokelelweyo kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa izixhobo zoomatshini zamaqela amakhulu oshishino, kwaye inamalungelo okulawula ukungenisa nokuthumela ngaphandle. Emva kwamashumi eminyaka yophuhliso, inkampani ibisoloko inyanzelise ukuba ithathe indlela yokwenziwa ngokutsha okuzimeleyo, uphuhliso lwenzululwazi. Ngoku ikhokela imveliso yeeseti ezipheleleyo zezixhobo zomgca weplywood, iimveliso ezincedisayo, zilandela ukuphuculwa kwemfuno yemarike rhoqo.Imveliso ithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-50 nakwimimandla yaseAsia, eYurophu, eAfrika naseMelika.
Ishishini lishishini leSizwe le-high-tech, iPased GB/T19001-2016 isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho kunye nesatifikethi seCE. Ineziko lophuhliso lobugcisa boshishino lwephondo, iziko lophando lophando lobuchwephesha bokwenza amaplanga, iPhondo laseShandong “ishishini elinye kunye neteknoloji enye” ​​iziko lophando, iziko loyilo loshishino lukamasipala, ilebhu yebhodi yeWeihai Wood-Based etc. Inamalungelo awodwa omenzi wechiza angama-23, i-25 eluncedo. imodeli patent, eyalelwe 10 umgangatho professional. Eli shishini liphumelele “iPhondo laseShandong iMbasa yesiThathu yeNzululwazi kunye neTekhnoloji yeNkqubela”, kuqala ibeka imimandla ekugxilwe kuyo kwiphondo laseShandong iimveliso zezixhobo zobugcisa kwiprojekthi ezimeleyo yokusungula. Ibhaso lokuqala leempumelelo ezigqwesileyo kwi-Technological Innovation, “ibhaso lokuqala leemveliso ezitsha ezigqwesileyo” “ibhaso lesibini lesayensi kunye nethekhnoloji ibhaso loshishino loomatshini baseTshayina” “ibhaso lokuqala lembasa yemveliso entsha yemveliso yehlathi laseChina kunye namanye amabhaso”. Umgca we-BSY we-brand veneer rotary peeling kunye ne-CNC spindleless rotary peeling lathe zichongwe njengeemveliso zodidi oludumileyo kwiPhondo laseShandong.
Ishishini lilungu usekela-mongameli we China Forestry Machinery Association ilungu kunye neyunithi yoLawulo yombutho isixhobo umatshini China, izixhobo zamahlathi kushishino iyunithi yomlawuli innovation umfelandawonye yesizwe, Shandong izixhobo eziphezulu kwishishini umbutho ilungu iiyunithi umbutho, China ishishini umatshini isixhobo somthi “phezulu ezilishumi” amashishini olutsha oluzimeleyo, ibhetshi yokuqala yamashishini amancinci naphakathi “iintshatsheli ezifihlakeleyo” kwiPhondo laseShandong.
I-BSY ibonelela ngoluhlu loomatshini ababandakanya iplanti yeplywood, i-log debarker, i-veneer single-spindle rotary lathe, i-veneer spindle-less rotary lathe, i-veneer dryer, i-plywood press, i-plywood edge Trimmer, i-plywood Sander njl.
Inkonzo kunye noqeqesho lunikezelwa ngabasebenzi abaqeqeshwe ngokufanelekileyo kubathengisi be-BSY, okanye ngokuthe ngqo ngamagcisa enkonzo yenkampani.
Injongo yethu ibisoloko ikukubonelela ngezona zixhobo zikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo. Kwakhona, wamkelekile kwi-BSY Industry Group. Ukuba ufuna ulwazi olongezelelweyo olungafumanekiyo kule webhusayithi, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.